GOOGLE PLAY ဝန်ဆောင်မှုကို UPDATE လုပ်နည်း - GOOGLE က - 2019
Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
အများစုကအရံပစ္စည်းဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ PC တို့အကြားမှန်ကန်သောအပြန်အလှန်ပေးမညျဖွစျကွောငျးဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ MFP Epson Stylus CX4300 သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်အသုံးပြု Pre-install သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းများလိုအပ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့တာဝန်ပြီးမြောက်ဖို့နည်းလမ်းတွေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဆှေးနှေးပါမညျ။
Epson Stylus CX4300 များအတွက် drivers
Epson CX4300 ဘက်စုံသုံး device ကိုအချို့သောတိကျတဲ့ features တွေမရှိပါဘူး, ဒါကြောင့်ကားမောင်းသူ installation ကိုတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်လမ်းထွက်ယူသွားတတ်၏ - အခြားမည်သည့်အစီအစဉ်သည်လိုပဲ။ မဆိုလိုအပ်သော software များရှာဖွေ install ဖို့ဘယ်လို5ရွေးချယ်မှုကိုကြည့်ကြရအောင်။
Method ကို 1: ထုတ်လုပ်သူရဲ့ဆိုက်ကို
ဟုတ်ပါတယ်, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ Epson အဖြစ်ကတခြားထုတ်လုပ်သူမှာထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုလိုအပ်သောဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့, ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်သယံဇာတနှင့်ထောက်ခံမှုအပိုင်းရှိသည်။
အဆိုပါ MFP ပေါရာဏ၏အမျိုးအစားပိုင်ဆိုင်ကတည်းက operating system အားလုံးမှာ software ကိုအဆင်ပြေအောင်မ။ သင်တို့သည်ဤ operating စနစ်များ 10. ရှင်ထက်အခြား Windows အပေါငျးတို့သလူကြိုက်များဗားရှင်းများအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်, သငျသညျကို Windows 8 များအတွက် software ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါသို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါးတွင်အခြားနည်းလမ်းများသွားပါ။
ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်အဖြစ်အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုဒေသတွင်း site ကို, မသာနိုင်ငံတကာဗားရှင်းရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုချက်ချင်းသငျသညျကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာယင်း၏အရာရှိတဦးကရုရှားဌာနခွဲမှ link တစ်ခုပေးအပ် "ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပံ့ပိုးမှု".
လိုချင်သော MFP ၏ရှာဖွေရေးအကွက်တွင်မော်ဒယ်အတွက် Enter - CX4300။ ကြောင်းနှင့်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပိုမိုတိကျစွာရလဒ်များကိုစာရင်းတစ်ခု, တစ်ခုတည်းသောတိုက်ဆိုင်မှု။
တခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါအရာကနေ3tabs များခွဲခြား displays software ကိုထောက်ခံကြောင်း, "ယာဉ်မောင်း, အသုံးအဆောင်များ", ထို operating system ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ပရင်တာဒရိုင်ဘာ" အဆိုပြုထားသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကလစ်နှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင် "ဒေါင်းလုပ်".
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထား ZIP ဖိုင်-file ကို Extract နှင့် installer ကို run ။ ပထမဦးဆုံးပြတင်းပေါက်မှာ select လုပ်ပါ « Setup ကို».
အကျဉ်းဖွင့်နေသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးနောက်သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦးကို PC Epson devices တွေကိုချိတ်ဆက်ထားမြင်ရပါလိမ့်မည်ရှိရာတပ်ဆင်ခ utility ကို, ကို run ။ ကျနော်တို့ခွဲဝေခံရဖို့ခွင့်ရှိသည်, ထိုသို့ဓြှုအောက်မှာ "ပုံမှန် Make"အဆိုပါ MFP အဓိကမပါလျှင်သင်ကချွတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
License Agreement ကိုကလစ်အတွက် "လက်ခံပါသည်".
သင်အမှန်တကယ် Epson ကနေ software ကို install လုပ်ချင်လျှင်စဉ်အတွင်းသင်တစ်ဦးသည် Windows ပေးတဲ့ dialog box မှရရှိပါလိမ့်မယ်။ နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဟုတ်ကဲ့အဖြေ "Install".
သတင်းစကားတစ်ခုပရင်တာ port ကို install လုပ်ပြီးကြောင်းပြသသောနောက်, installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်ပါ။
Method ကို 2: နာမည်ကြီးတံဆိပ် utility ကို Epson
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအရံပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးအတှကျတစ်ဦးတည်းပိုင်အစီအစဉ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကမှတဆင့်အသုံးပြုသူများဆိုက်မှတစ်ဆင့်တစ်ဦးကို manual ရှာဖွေရေးဖျော်ဖြေစရာမလိုဘဲ software ကို install နှင့်အသစ်မွမ်းမံနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာ - ဤလျှောက်လွှာကိုများအတွက်ထပ်မံလိုအပ်ကြောင်းမေးခွန်းထုတ်စရာတုိ့။
download စာမျက်နှာတွင် Epson Software Updater ကိုကိုသွားပါ
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားနှငျ့အတူပိတ်ပင်တားဆီးမှုတင်တွေ့မြင်သည်အထိအစီအစဉ်၏စာမကျြနှာကိုဖှငျ့ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ «ဒေါင်းလုပ်» တစ် Windows အတွက်ဗားရှင်းနဲ့ဒေါင်းလုဒ်၏အဆုံးအဘို့အစောင့်ပါ။
တပ်ဆင်ကို run, ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံ «သဘောတူ»ထိုအခါ "အိုကေ".
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအလိုအလျောက်ကွန်ပျူတာ MFP ချိတ်ဆက်စုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်, နှင့်သင်ပြီးသားမဟုတ်ရှိပါက - ကအချိန်ပါပဲ။ ကို select လုပ်ပါအတော်ကြာချိတ်ဆက်ကိရိယာ, ဘယ်အချိန်မှာ CX4300 စာရင်းချတစ်စက်ကနေ။
ဗိုလ်မှူး updates များကိုတူညီသောအပိုင်း၌ဖြစ်လိမ့်မည် - «မရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းအပ်ဒိတ်များ»။ ထို့ကြောင့်သူတို့ check လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ကြွင်းသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တည်ရှိသည် "အခြားအသုံးဝင်သော software ကို" နှင့်အသုံးပြုသူရဲ့သမ္မာသတိအပေါ် installed ။ ကလစ်နှိပ်, သင် install လုပ်လိုသော updates များကိုသတိပြု "ကို item (s) ကို Install".
သင်မောင်းသူကို update တဲ့အခါမှာ, သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အောင်မြင်သောပြီးစီးအကြောင်းကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်လိုအပ်သည့်အပိုဆောင်း firmware ကို Pre-ဖတ်ပါညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ, စာနယ်ဇင်းတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် « Start ကို».
အသစ်တစ်ခုကို firmware ကိုဗားရှင်းကို install စဉ်အခါ, IFIs နှင့်၎င်း၏အာဏာနှင့်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဘာမှမလုပ်ကြပါဘူး။
ပြီးစီးအပေါ်သို့သင် window ၏အောက်ခြေမှ update ကို၏ status ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနေဖို့ « Finish ကို».
တစ်ဖန်သင်တပ်ဆင်၏ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုသိစေလတံ့သော Epson Software များ Update ကို, re-ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါသတိပေးချက်တွေနဲ့ပရိုဂရမ်ကိုပိတ်ပြီး - သင်ယခုရှိသမျှသော MFP features တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
Method ကို 3: တတိယ-party application
Installing software ကိုသာလုပ်နိုင်စီးပွားဖြစ် utilities, ဒါပေမယ့်လည်း Third-party applications များ developer များ။ သူတို့ဆိုပြည်တွင်းရေးကွန်ပျူတာစက်ကိရိယာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြင်ပပစ္စည်းတွေကို update နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက - သူတို့မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမှချည်ထားသောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်။
ဤအစီအစဉ်များအနက်လူကြိုက်များ DriverPack Solution အတွက်ဦးဆောင်နေသည်။ သူမသည် Operating System နှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုအပေါငျးတို့သဗားရှင်းများအတွက်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကယျြပွနျ့ဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏အသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုရှိပါကသင်သည်ငါတို့စာရေးဆရာများ၏အခြားကနေလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Read more: ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ drivers တွေကို update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို, DriverPack Solution နှင့်အတူ
ကို detect နှင့်စက်ကိရိယာများအမျိုးမျိုးကို update အခြားရိုးရှင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခု - analog DriverMax ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကဆောင်းပါးထဲမှာ disassembled သူမ၏ညွှန်ကြားချက်များတွင်အလုပ်လုပ်ရန်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: DriverMax သုံးပြီးယာဉ်မောင်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
Method ကို 4: MFP အမှတ်အသား
ငါတို့သည်သင်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကွန်ပျူတာဖွင့်တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲအမှတ်အသားလည်းမရှိရုံကိုအခြားပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့တစ်ဦးဘက်စုံသုံး device ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ကျနော်တို့ယာဉ်မောင်းများအတွက်ရှာဖွေဒီနံပါတ်ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ လွယ်ကူသော ID ကို CX4300 Find - ရုံအသုံးပြုမှု "Device Manager"ထိုအခါ data တွေကိုသူတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ဘယ်လိုသိသောအင်တာနက်ပေါ်ရှိအထူးက်ဘ်ဆိုက်များ, တစျခုအတှကျရှာဖွေရေးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တာဝန်ရိုးရှင်းနှင့် ID ကို Epson Stylus CX4300 ပေး:
သူတို့ထဲကတဦးတည်း (များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးလိုင်းလုံလောက်ပါတယ်) ကိုသုံးပြီး, သင်မောင်းသူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 5: standard Windows ကိရိယာတွေ
idem "Device Manager" ၎င်းတို့၏ server များပေါ်တွင်တှေ့အားဖြင့်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒီ option ကအပြစ်အနာအဆာမရှိပဲမဟုတ်ပါဘူး - မိုက်ကရိုဆော့ဖထံမှယာဉ်မောင်းတစ်ဦး set ကိုပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏနောက်ဆုံးဗားရှင်းကို install မပေးပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ပိုမိုဘက်စုံသုံးစွမ်းရည်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာရသောအားဖွငျ့, ဆော့ဝဲအသုံးပြုသူမရကြဘူး။ သို့သော် device ကိုသူ့ဟာသူစနစ်တကျ operating system ကိုအသိအမှတ်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ယင်း၏ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: standard Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီးယာဉ်မောင်း Installing
ကျနော်တို့ဘက်စုံသုံး device ကို Epson Stylus CX4300 ပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်မည်သို့5နည်းလမ်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်။ သင်တို့အဘို့အအရှိဆုံးလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေကိုသုံးပါ။
ဗီဒီယို Watch: What to do if Google play store is not working in your android device (သြဂုတ်လ 2019).